6 mmanụ Dị Mkpa Maka Nchịkwa Iwe - Essential Oils Bulk | AromaEasy
Ihe na April 20, 2020 June 11, 2020 by Matt
mmanụ dị mkpa maka iwe
Iwe site na nchịkwa ya, n'ọtụtụ oge, nwere ike imerụ onye ahụ na-akpasu iwe na ndị gbara ya gburugburu aka. Ọ dị mkpa ijikwa iwe gị tupu ọ banye na nnukwu ikuku. Ma nwee ekele, enwere ụfọdụ ngwaọrụ nwere ike inyere anyị aka pụọ.
Isiokwu a lekwasịrị anya n’itinye mmanụ 6 dị mma dị mkpa maka njikwa iwe, yana usoro ị nwere ike iji jikwa mmetụta a dị oke mma.
Osisi 6 kacha mma maka njikwa iwe
Iji bido site na iji mmanu ogwu mee ihe maka iwe iwe, odi nkpa iji mmanu di nkpa. Nwere ike iji ha dị iche iche ma ọ bụ jikọta ha ọnụ iji mepụta ngwakọta mgbochi iwe dị egwu.
A maara dị ka ọgwụ na-egbochi mmadụ, Ylang-ylang mmanụ dị mkpa nwere ike ịba uru dị ukwuu n'ịchịkwa iwe.
Ngwongwo ya na-eme ka obi dị jụụ nwere ike ime ka ị daa jụụ site n'ịhazi ọnụego obi. Ọ nwekwara ụtọ dị ụtọ nke nwere ike ịkpalite mmụọ na-anụ ọkụ n'obi ma na-ewuli elu nke nwere mmetụta na-adọrọ adọrọ na ahụike uche gị.
Ọ bụ ezie na ị na-eme ka ahụ dị jụụ ma nwee uche zuru oke, ọ na-akwalite mgbasa ọbara iji belata isi ọwụwa na isi ọwụwa.
Chamomile mmanụ dị mkpa nwere mmetụta ọgwụgwọ na sistemụ akwara yana sistem nri. Ọ nwere ike inye aka n'ụzọ dị mfe n'ibelata esemokwu, nsogbu, yana ehighị ụra nke ọma site n'imezi ụra. Mmanụ a dịkwa mkpa nwere njikwa antioxidant nke nwere ike ichebe ahụ gị pụọ na mmebi nke iwe n'ogo cellular. Na mgbakwunye, Chamomile na-arụkwa ọrụ dị ka ihe na-akpata mmetụta uche, na-enyere ndị mmadụ aka inwe echiche ziri ezi.
Rose mmanụ dị oké mkpa pụrụ ịbụ ezigbo mmanụ maka iwe iwe, mfu, na ịnọrọ naanị onwe gị. Site n'iwe iwe, ọ na - eme ka ndị mmadụ nọrọ nwayọ na udo site na ibelata uche dị nwayọ.
Dị ka ifuru mkpa mmanụ, ya nro, mkpụrụ, ụtọ na -eme ka senti isi nwere ike inye aka gbaa ume. Oke mmanụ dị mkpa ga - eme ka ọnọdụ gị dịkwuo mma ma kwalite ọnọdụ gị, na - eduga gị nsonaazụ ọma na ọdịmma gị na ọnọdụ iji nyere aka mee ihe ị na - ewe iwe.
Nwere ike wepu mmanụ dị mkpa site na karama ahụ maka isi ísì ahụ. Iri mmiri ole ga-abanye n’ime mmiri ịsa ahụ gị ga-akwado ahụike uche gị site na mbelata nchekasị. Tupu ojiji eji mmanu mmanu tuo ya.
Ndị mmadụ n'oge ochie na-eji mmanụ a ka ha na-atụgharị uche maka oke nsonaazụ ya. Lemongrass na-enyere aka izu ike ma na-eme ka ọgụgụ isi doo anya. Ime ka ị daa nwayọ ma mekwaa iku ume, mmanụ dị mkpa na-ebelata isi ọwụwa na oke isi, na -ebelata iwe gị na nchekasị gị. Lemongrass na-ebelata mbufụt ma na-akwadokwa usoro mkpụrụ ndụ, na-enyere ndị mmadụ aka ibelata mmebi anụ ahụ nke iwe.
Lavender bụ otu n'ime mmanụ kachasị dị jụụ n'ụwa ma ejirila ya rụọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ iji chịkwaa iwe. Na-eku ume na-enye lavender mmanụ nwere ike belata nchegbu ma mezie obi gị. Emeputara Lavender iwelata nchekasị, nsogbu ịrahụ ụra, ma na - enyere ndị mmadụ aka idozi isi ọwụwa, iwe na akwara mgbu. Ihe ịrịba ama ndị a bụ ihe mgbaàmà nke oke iwe.
Mmanụ oroma dị ụtọ bu ihe kwesiri ntukwasi obi na ibelata nkụda mmụọ na nchekasị dika ọ na emeputa obi iru ala. N'ịbụ onye na-enwusi ike ma na-akpali akpali, ọ mara mma dị mma mgbe ịchọrọ igbochi uche gị iwe. Otu uru ọgwụgwọ ọzọ nke mmanụ mmanụ dị oke mkpa nwere, na-enyere aka nhichapụ ahụ.
Kedụ ka Aromatherapy si ewepụta uche anyị?
Aromatherapy nwere ike belata nchekasị na nchegbu n'ụzọ dị iche iche. Approachzọ kachasị mma nke nchịkwa iwe na aromatherapy bụ inhalation.
Sistemụ limbic nwere ọtụtụ ọrụ dị ka ịchịkwa mmetụta na usoro ụjọ. E gosipụtawo ụfọdụ mmanụ dị mkpa iji kwalite ahụike limbic, si otú a na-enyere aka ịchịkwa mmetụta dị ka iwe na omume ike, na-enyere ndị mmadụ aka ịchịkwa mgbasa ọbara na nrụgide.
Mmanụ ndị dị mkpa na-arụ ọrụ na sistemụ na sistem na ahịhịa. Na-eku ume n’ime iwe ndị na-eme ka iwe dị jụụ site n’eji iji diffuser ma ọ bụ nanị ikuru ume, nwere ike ime ka adrenaline dịkwuo mfe, mụbaa serotonin, na-enyere gị aka icheta oge obi ụtọ ndị ahụ.
Ma ọ na-eme ala ma ọ bụ na-eme ka ọ dị elu, mmanụ dị mkpa nwere ike inyere gị aka iwepụ iwe na nkụda mmụọ. Ya na okpukpo mara nma, o na enyere gi aka ijikwa iwe gi ike na odi nma.
Otu esi eji mmanụ mmanụ dị mkpa maka njikwa iwe
Inhalation bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji nweta uru site na aromatherapy. Enwere ụzọ abụọ ka emee, nke a na-adụ ọdụ maka njikwa iwe.
Nke mbụ bụ ị rubụ mmanụ dị mkpa n ’nkwụ gị mgbe ị malitere inwe ntụ. Mgbe ahụ tinye aka gị n’ebe dị mma imi gị, kuo ume nwayọ na nke miri. Mara: ị ga - ezere ebe dị nhịahụ dịka eriri imi.
Uzo ozo, nke kachasi nma iji mmanu zuru oke iji belata iwe bu inhalation site onye mgbasa ozi. Naanị tinye mmanụ dị mkpa na onye nkesa, wee nweta anụ ahụ yana uru uche site na ọgwụgwọ aromatherapy. I nwere ike ime nke ahụ ma ị nọ n’ọfịs ma ọ bụ n’ụlọ.
Iji jirichaa arụmọrụ nke aromatherapy, ị kwesịrị ị na-ahọrọ mmanụ dị oke mkpa kachasị mma. Ọ bụghị mmanụ niile dị mkpa ha nhata. Ọbụna ụfọdụ bụ mmanụ na-esi isi ụtọ nke bụ ngwakọta nke kemịkalụ na mmanụ ụgbọelu. Ka ha na-eitatingomi isi, ahịa ndị ahụ enweghị ike ịgwọ uru nke ahịhịa, osisi, ma ọ bụ ifuru. N’ezie, anyị enweghị ike ịtụ anya na mmanụ ndị ahụ dị mkpa ga-enyere anyị aka ijikwa iwe. N'ihi ya, jide n'aka na ị na-atụtụ mmanụ dị 100% dị ọcha dịka ndị achọpụtara na Aroma dị mfe.
Otu aka ahu, obughi ndi na emeputa ihe nile haziri nha. Diffọdụ ndị mgbasa ozi nwere ihe mebere plastic nwere ike meghachi ma mebie mmanụ ndị dị mkpa, na-eme ka mmanụ gharazie ịba uru. Ebe ndị ọzọ na-enweta nke ọma na vaporizing mmanụ dị mkpa n'ime nnukwu ohere. Si na onye na-eweta ihe ị ga - atụkwasị obi kwụrụ onye na - eweta ihe ị ga - eme, wee bido njem gị n'ụzọ dị mfe.
Ihe ị kwesịrị ịtụle mgbe ị na-eji mmanụ dị mkpa maka iwe
Iwe nwere ike ịbụ nsogbu gbara ọkpụrụkpụ ma ọ nwere ike ịchọ nlekọta ahụike ọkachamara dịka nnọkọ ọgwụgwọ iji lebara ya. N'ihi ya, cheta na:
Mmanụ ndị dị mkpa nwere ike inye aka n'ịbelata mgbaàmà ọ bụ ezie, ha enweghị ike idozi ihe kpatara iwe ahụ.
Enweghi ike iji mmanu mmanu mee ihe dika uzo ozo maka ọgwụgwọ ogwu.
Ezigbo mmanụ dị ezigbo mkpa - ị kwesịrị ị na-atụgharị ha tupu eji ya eme ihe iji zere mgbakasị ahụ.
Ogologo oge ole ka mmanụ ndị dị mkpa na-adịru?